Prince Harry (သတင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Prince Harry (သတင်း)
Prince Harry (သတင်း)
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 24, 2012 in News | 20 comments
ဒီရက် အတွင်းကြားရတဲ့ သတင်းပါ။
အင်္ဂလန်ရဲ့ နန်းအရိုက်အရာခံ နံပါတ်(၃) နေရာက မင်သားလေး ဟာရီ ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးပုံ များ အင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နေတာ သိသူများ သိကြမှာပါ။။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ Las Vegas ဟိုတယ်ခန်းထဲ မှာ ကိုယ်လုံးတီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နဲ့ ပူးရက် ရပ်နေတာလဲ ပါသတဲ့။
အဲဒါ သူ့ပုံ ဆိုတာ အမှန်ဆိုတာ နန်းတွင်းက သတင်းထုတ်ပြီး နိုင်ငံသတင်းစာတွေမှာ မဖော်ပြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ ပါတယ်။
ဘယ်သတင်းစာကမှ မဖော်ပြခဲ့တာ ကို ဒီနေ့တော့ နိုင်ငံတွင်းထုတ် The Sun သတင်းစာကနေ မျက်နှာဖုံး မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ The Sun သတင်းစာက ပြောတယ်။
သူတို့ ဟာ နိုင်ငံမှာ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ ကို အကဲစမ်းတာ ဆိုဘဲ။
နောက်ပြီး တစ်ည ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တန် ဟော်တယ်မှာ ကဲတဲ့ နိုင်ငံက အခွန်ပေးသူ တွေ ရဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ဖြုန်းတာ ကို ဖော်ပြတာ ဆိုဘဲ။
(အမှန် က ဟာရီ ဟာ လေတပ် အရာရှိလစာရသူ လူလွတ် မို့ ရယ်၊ သူ့အမေ ရဲ့ အမွေတွေ နဲ့ရယ် သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပစလက်ခတ် သုံးနေတာ မကြားရပါဘူး။
ဒီလို အရွယ်နဲ့ အလေရိုက် မနေဘဲ နိုင်ငံ တာဝန် ထမ်းနေတာပါ။ တပ်ထဲမှာ တော်ဝင် တွေ ဆိုပြီး ခိုနေလို့ ရတယ် မထင်လေနဲ့။ ဒီလို သတင်း စောင့်နေတာကလား။)
ရီဖို့ကောင်းတာက အဲဒီသတင်းစာ က မဟုတ်တရုတ် သူများအတင်း သတင်းလုပ် ရှာထည့်နေတဲ့ သတင်းစာပါဘဲ။
နောက်ပြီး အဲဒီပုံတွေ ကလဲ အင်တာနက် သုံးသူတိုင်း ကြည့်ပြီးသား ပါဘဲ။
အဲဒါကို မစောင့်စည်းနိုင်လောက်အောင် ကို ထည့်တာကတော့ သူတို့ စိတ်ကူးပေါ့။
တကယ်ဆို သူများ နိုင်ငံက ဟားလွတ် လိုက်တဲ့ မင်းသားပုံတွေအတွက် ကိုယ်ကလဲ နိုင်ငံသားကောင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ အတူ တွဲမနေသင့်ဘူးလား။
ဒီလို အကြောင်းမဟုတ် ဘဲ တကယ်အရေးကြီး တဲ့ နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးပြု သတင်းတွေ ကိုတော့ ကောင်းကောင်း မဖွ နိုင်/တတ်တဲ့ သတင်းစာ ရဲ့ သူတို့ ဘာ ဆိုတာ ပြတဲ့ပွဲ ပါဘဲ။
တကယ်တော့ သူတို့ ဂိုး သူတို့ ပြန်သွင်းမိနေတာလား၊ သူများ ကို ထိုးတဲ့ လက်ညိုး အတွက် ကျန်တဲ့ လက်ချောင်းတွေက ကိုယ့်ဘက်ကိုလဲ ပြန်ထိုးတတ်တာ လို့ တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်။
ကျွန်မ အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာက
ထုံးစံ အတိုင်း သတင်းတွေမှာ မှတ်ချက်တွေ တွဲလာတာပါဘဲ။
တော်ဝင်နန်းမျိုးအနွယ် သာမက လေတပ်က အရာရှိ တစ်ယောက်ဟာ ဒီလို လုပ်သင့်/မသင့် ဆိုတာ ဝေဖန်တာတွေပါ။
ဟိုးအရင် သူ့အမေ ခေတ်က ဆိုရင်တော့ မသိဘူး။
အခုခေတ် ကတော့ ဒီလိုလုပ်လို့ အများစုက ရှုံ့ချတယ်ဆိုတာ မတွေ့ပါဘူး။
ဒီနေ့ လူအများစု ဟာ အရင်နေ့ လူတွေလောက် အတွေးမကျဉ်း တော့တာ သူတို့သတိပြုမိဖို့ကောင်းပါရဲ့။
ကွန်မန့် တိုင်းလိုလိုဟာ ဟာရီ ဘက်ကနေပြီး သတင်းစာ ကို ရှုံ့ချကြပါတယ်။
ရှက်ဖို့ကောင်း တာက ဟာရီလား။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်တဲ့ သူလား။ ဆိုတာ အသိရှိသူတိုင်း နားလည်နေတတ်ပါပြီ။
တစ်ချို့ ကလဲ The Sun ရဲ့ ဒီလို ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက် ရဲရဲရင့်ရင့် Publish လုပ်တာကို အားပေးကြပါ၏။
ကျွန်မ လဲ ဝင်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။
လူလွတ် တစ်ယောက်လဲဖြစ်၊ လူငယ် တစ်ယောက်လဲဖြစ် တဲ့ သူတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ခွင့် ယူပြီး သူ့ဟာသူ အခန်းထဲ မှာ ကဲတာ ဘာဖြစ်သလဲ။
ဘယ်သူ့ကို ထိခိုက် စေလို့လဲ။
အများနဲ့ အရက်သောက်ပြီး အဝတ်ချွတ် game ကစားတာ ကစားနေကြတာဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ထင်ကြေးပေးသူလဲ ရှိပါတယ်။
ဒီလို သတင်းဟာ အရင်က မျက်စိစပါးမွေးစူးရင်တောင် ခေါင်းဖြတ်ဆိုတဲ့ တော်ဝင်မင်း တွေ လက်ထက်မှာ လုပ်ရဲသလား။
ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ မို့ ဒါဟာ ဖော်ပြတယ် လို့ ဆိုတာ မှန်ပေမဲ့ သူများရဲ့ Privacy ဆိုတာကို ထိတာပါဘဲ။
ဒါဟာ မှန်တယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကား ကို တလွဲအသုံးချတာလို့ ထင်ပါတယ်။
နန်းတွင်းက ဘာပြော မလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါဘဲ။
မှန်းရရင်တော့ သူတို့ လစ်လျူရှု လိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဟာရီ အတွက် တော့ သင်ခန်းစာ ဘဲယူမလား။သူ့ကို လူတွေက ချစ်ကြောင်းပြတာ တွေ့လို့ ဘဲ ပီတိဖြစ်နေမလား ဘဲ။
မြန်မာ ဂျာနယ်တွေမှာ ပါပြီး လောက်ရောပေါ့။ သိချင်သား။
getalife, who reads the sun anyway.
Da Sun Done it —to put in their words –what else do we expect from this bumba clot ofa‘paper’— what else does Rupert Murdoch peddle? Same old ,same old —- the sooner Murdoch diesahorrible death the bette
ah well surprise surprise.give Harryabreak.
boys will be boys.am sure more important news to report.
First of all, people need to stop this idea of shame in the Royal family, this guy isayoung man having great fun,
he was picture naked in the hotel not on the street, he did not kill, rape, neither did he still from anyone.
He was inaprivate room (hotel), and that’s not different to most people being naked in their own houses.
May be the fool who took the photos and put them on the internet should be ashamed.
Do you mean to tell me that he shouldn’t beahuman being ?
Most people do outrageous things behind closed doors, fortunately no body take picture and put them on the internet for people to see.
Harry isadown to earth person, he feels that he is like any ordinary person so he acts like one. Unlike the rest of those two faced you people love as royals.
I wish harry can be leftalone and live his life, in fact i think his mum would have been proud of him for being himself, not pretending to be what he is not to please the country.
For the sun, all you wanted was to sell paper, i hope you have sold enough by now, may be record breaking sale.
Go on Harry you’re the best, i wish i could invite you for my birthday.
he isanormal lad out to have fun – im sure there are more important stories to make front page!!!!
Who cares!! A complete non-story!!
This lad works hard and plays hard not unlike many other lads his age, it’s nice to see him let his hair down and just goes to show the Royal Family are not that different to everyone else. Go Harry xxxx
သူ့ဖာသာ အဲ့လိုလုပ်နေတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့လူဂရော အပြစ်မရှိသွားဘူးလား
ကိုယ့်အခန်းထဲ ကိုယ့်ဖာသာ ဂျွမ်းထိုးထိုး
ဂဒေါ့ဘာဗျာ ဖင်ဖျဲဖျဲပေါ့ဗျာ ဘူ့နဲ့ဘာဆိုင်လဲ
အရီးရေ ! ကျောင်းသား ဘဝ မှာ မိန်းကလေး တွေေ.ရှ ကိုယ်တုံးလုံး ( အပေါ်ပိုင်း ) နဲ့ ဆိုရင်တောင် ရှက်မိတယ် ။ အသက်နည်းနည်း ကြီးလာတော့ ခန်ဒါကိုယ် အပေါ်ပိုင်းလောက်ကို အထူးအထွေ မရှက်တော့ပါဘူး ! ဟော — ခုနောက်ပိုင်းကျ တော့ အပြင်မှာ ( ယခင် ဗီဒီယို ထဲမှာပဲ မြင်ဘူးတဲ့ ) တကိုယ်လုံး ကိုယ်တုံးလုံး ကို ထူးထူးထွေထွေ ဆန်းဆန်းပြားပြားလုပ်ပြီး ကြည့်မနေ ပြောမနေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ကြုံတွေ. တြွေ.မင်နေရတော့ ဒီကိစ်စ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဲဒီလို နိုင်ငံတွေမှာတော့ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ရလေခြင်း ယူဆကြ ဟဲဗီးပြောကြဆိုကြ လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူးခင်ဗျ ! ကျွန်တော့ လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ နေပြီး ရေချိုးရင်းမြင်ရင် ပိန်တဲ့သူ ဘော်ဒီ သေးတဲ့သူ နဲ့ ဗိုက်ပူပြီးေ.ရှထွက်နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲ စကားလုပ်ပြောကြတယ်ဗျ ! ခုကိတ်စမှာ မင်းသား ဆိုတဲ့ အခြေအနေအပေါ် မှာပဲ ဦးတည်ဝေဖန်ပြောဆို နေကြတယ်ထင်ပါတယ် ။ နာမည် ကြီး တယောက်အနေ နဲ့ လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ။ ကဘာကျော် ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း သူတို့ကတင်မှာပါပဲ ။ ယောက်ကျားလေး ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော် ကတော့ လူအများ ရှေမှာခုထိ ကိုယ်တုံးလုံး မနေရဲသေးပါ ။ လူရှိတဲ့ မြင်ကွင်းဆိုရင် ဘောင်းဘီတိုဝတ်ပြီး ရေချိုးတုန်းပါ ။ အဲဒီ မင်းသားနေရာမှာ ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ — ချက်တယ် — ။
သူ့ လွတ်လပ်ခွင့် သူ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူ ဖြုန်းတာပဲ လို့ ပဲ မှတ်ချက်ချမိပါတယ် ဗျို့ 
ဒီဆန်းသတင်းစာကတော့ ၊ အာလကေ တော်တော်ခိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ကျုပ်သာဟယ်ရီဆိုရင်တော့ ပုံရိပ်အသုံးပြုခအတွက် ပြန်တောင်းမိမှာပဲ
ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့တာလား၊ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရတာလားကို တွေးနေမိတယ် အရီးရေ။
ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ သတင်းကို သူများသိက္ခာချချင်ရုံနဲ့ တင်တယ်ဆိုရင် သဇင့် Video လိုမျိုး အဆင့်ပဲနေမှာပေါ့ မလတ်ရယ်။
အဲဒီသတင်းစာ အဆင့်မရှိရင် မဖတ်ပဲ သပိတ်မှောက်လိုက်ကြပါလား။
တော်ပါသေးရဲ့။
လက်နဲ့ တော့ အုပ်ထားသေးလို့ ။
အရီးရေ ဟိုအရင် 1960s 70s ၀န်းကျင်လောက်မှာ အဲ့လို ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ဖူးတယ်။
တော်ဝင်မင်းသမီး မာဂရက်ပုံတွေ ကို ဘဏ်ဖောက်တဲ့ သူခိုးလက်ကို ရောက်သွားတာ။
နောက်ပိုင်း အပေးအယူလုပ်ပြီး ပြန်ရွေးခဲ့တဲ့ ပုံပဲ ။ အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ အင်တာနက်ခေတ်မဟုတ်ဖူး ဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ မပျံ့ခဲ့ဖူးပေါ့။
တကယ့်အဖြစ်မှန်ကို ရိုက်ထားတဲ့ The Bank Job ဆိုတဲ့ ကားကို ကြည့်ဖြစ်တော့မှ သိတာ။ မင်းသား Jason Statham ကို ကြိုက်တော့ သူ့ကားတော်တော်များများ ကို ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ကားလည်း တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
ဒီလို မျိုး ရိုက်တင်တာ ဖြန့်တာတွေကို အလွန်စက်ဆုပ်ပါတယ်။ သူတပါးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လွန်လွန်ကျူးကျူး စွက်ဖက်ပြီး နှောင့်ယှက်တာ ။ ဟိုတလောက ပြောသွားသလို Buzz တွေ viral တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပေါ့။
ဒီကိစ္စမှာတော့ ဟယ်ရီ့ဘက်က ဘာမှအမှားရှိတယ် မထင်ပါဘူး..။
အခန်းထဲ အ၀တ်ချွတ်နေထိုင်တာနဲ့ သူ့ပိုက်ဆံ သူတရားဝင်သုံးတာလဲ ဘာမှ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စရာမရှိပါဘူး..။ မသင့်တော်စရာလဲ မရှိပါဘူး..။
အဲဒါလေး ကြော်ငြာရတာတော့ အမြတ်ထွက်တယ်။
ဆိုတော့…. အဲဒီသတင်းလောက်နဲ့ လုပ်စားဘို့ကြံတဲ့ သတင်းစာပဲ ငပေါဖြစ်သွားမှာပါ..။
မင်းသားဟာရီက.. အင်္ဂလန်မင်းသားဆိုတော့.. ဒီခေတ်အခြေအနေအရ.. ကမ္ဘာ့မင်းသားတပါးလည်း.. ဖြစ်နေတယ်ပြောရမှာပေါ့..။ သူ့မိသားစုက.. မထည့်ခိုင်းရင်.. ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သတင်းစာတွေမထည့်ယုံပဲလို့ထင်ပါတယ်..။ အလွတ်သမားတွေတော့.. ထည့်တာတရားတယ်ထင်တာပါပဲ..
“100 per cent single”ကြေညာထားသူပဲ..။
မှန်ပါပေ့ … ပရိုက်ဗေဆီ နဲ့ ပေါ်လဆီကို တွဲပြသွားတာ ….
မတူအောင် မန့်ရရင် အနော်က မိသားစုမှာ တတိယမြောက်နဲ့ နောက်ဆုံး အမွေဆက်ခံသူပါ
အခုလဲ အနော့် လစာနဲ့ အနော် ၁၀နှစ်ကျော်နေပီ အေးချေးဘဲ ….. ဘယ်တူမှ ဂုစိုက်ဘူး ..
အဲတော့ အနော်က ဟယ်ရီ မဟုတ်တဲ့ အရိစည် ဆိုတော့
ဒီတပတ်အားရင် ပေကျင်းက ဟိုတယ်တခုခုမှာ အဲလိုရိုက်ပီး မန်းလေး ဂေဇက်မှာ တင်ခြင်းကြောင်း
ခုလိုဘဲ လူပျိုလူလွတ်လေး၊ ကိုယ့်လစာ ကိုယ်စားနေသူ( အခွန်လဲ မထမ်းသလို ဘယ်သူ့အခွန်မှလဲ မစားထား) လေးရဲ့ပုံတွေကို
ထောက်ခံ အားပေး စေချင်ကြောင်း ……
အပေါ်က လူစာရင်းမှတ်သွားဘီ .. အားလုံး ၈ယောက် (အားမပေးရင် တွေ့မယ်)
ဒီလို ဆိုချင်ပါတယ် အရီးရေ
အထက်က စာကြောင့် အနှောင့်ယှက် ဖြစ်ခဲ့ရင် အမိုက်မဲလေးမို့ ခွှင့်လွှတ်ပါ ….
ပိုဆိုးတာက ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင် အင်္ဂလန်နိူင်ငံရဲ့ တော်ဝင် နန်းလျာတွေမို့ပါ
ကုန်စိမ်းသည် မစိန်ပု လုံချည် ပြင်ဝတ်တာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ပေမဲ့
အနော်တို့ ဒေါ်စု လုံချည်ပြင်ဝတ်တာ ဂရုစိုက်ကြ ပါလိမ့်မယ် ( အင်တာနက်ထဲပါ သွားရင်ပြောတာ )
ပါတာခြင်းတူတူ လေသံတွေလဲ ကွာပါလိမ့်မယ် …. အတည်ပြောတာပါ
လူ့မလိုင် ငမူးရဲစည် ကစ်သိုကွဲပီး ဟိုတယ်မှာ ပေါက်ကရလုပ်နေတဲ့ပုံ အင်တာနက်ထဲ ပါလာရင် (ပြောပါလိမ့်မယ် တစ်တစ်ခွခွ)
အဲ ပြည်သူချစ် အောင်ဆန်းရဲစည်လေး ဒီလိုပုံ ဖြစ်နေရင်( အမလေး ပြောရက်လိုက်ကျတာ သူ့မှာ နေ့မအား ညမအားနဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးပြုနေရတာ တခါတလေ လူပျိုလေးဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့ဟယ် ..(ဘယ်..ကလေက၀က ခိုးရိုက်ပီး လုပ်သလဲမှ မသိတာ)
အော် လူသားဆန်မှု ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံကြီးများမှာတောင် ယနေ့အထိ ရှိပါလားလို့ တွေးမိပါရဲ့
အော် .. စစ်စစ် ပေါက်ငြင်းကျေးဆို အူးလေဟယ်ရီက ဘရွတ်ကလင်းက ကောင်တွေလို လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေလို့ မရဘူးနော်
ဒီပုံတက်လာတာ လက်ခုပ် ၂ ဖက်ကြောင့်လို့ ထင်ပ…
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သတင်းဟာ သတင်းမလို့ သတင်းလို့ဘဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း
မှားသည် မှန်သည် ထိုနှစ်လီသည် ကာယကံရှင်၏ ခံယူချက် ပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း…….
အနှီသတင်းအပေါ် ထပ်ဆင့် လိုက်ပါ ခံစားသူတို့၏ အတွေးအမြင်သည် သမိုင်းမတွင် အရာမထင်ပါကြောင်း …
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျနော် အဲ့အရိုက်အရာ အဲ့အဆင့် အဲ့ဘ၀မျိုး ရောက်နေရင် အဲ့လို အဖြစ်မခံဘူး
၀ီလျှံနှင့် ဟယ်ရီအား မနာလိုမရှုစိမ့်သူ
ဒိုင်တိုဒီ ဗလာ အိုဗား အဲလိဒေးဗစ် ဟူဂိုကဒါ ဆက်ဒန်ဘာရှား ဆာကိုဇီရဲ
မောင်ရဲစည် ပြောသလို အဲဒီ လို အရိုက်အရာခံ တစ်ယောက်က ပစ်စလက်ခတ်မနေသင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဟာရီက သူဟာလဲ လူသားတွေထဲက အတူတူ လူပါဘဲ ဆိုတာကို ပြောလေ့ရှိသတဲ့။
အဲဒါကိုက သူ့ကို လူချစ်လူခင် များရခြင်း အကြောင်းတရပ်ပါဘဲ။
လူအများ က သူတို့စိတ်ရင်း အမှန်နဲ့ ရပ်ပေးကြတယ် ဆိုတာ အလကား တော့ မဟုတ်ဘူးလေ။
Celebrity တစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ သူ့ကို ချစ်တဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ် ရှိနေဖို့လဲ လိုတယ်။
အဲဒီအတွက် ရိုးသား ပွင့်လင်း မာန်မာန ကင်းနေဖို့တော့လိုမယ် ထင်ရဲ့။
ဒါပေမဲ့ တလောကလဲ ပါတီတစ်ခုမှာ နာဇီ ဝတ်စုံဝတ်ပြီး တက်တာ လူဝေဖန်ခံ ရပြီးပြီ။
ဒါကြောင့် မှတ်ချက်တစ်ခု မှာ အခုလို ပုံက နာဇီဝတ်စုံ ဝတ်ထားတာထက် စာရင်တော်သေးတယ် လို့ ဆိုထားသေး။
အမှန်က သတင်းက သတင်းပါဘဲ။
ပရိတ်သတ် ကတော့ အော် … ဒီလိုလား ဆိုပြီး မေ့သွားတတ်တာပါဘဲ။
ဒါပေသည့် အဲဒီကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ကတော့ သက်ဆိုင်သူ တွေ ဆီမှာ ကျန်ချင်လဲကျန်မယ်၊ မကျန်ရင်လဲ မကျန်ဘူးပေါ့။
ချီးမွမ်း ၇ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ ၇ရက် ကို ခံနိုင်ရည် ရှိရင် ပြသနာ မဟုတ်ပါ။
မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မီဒီယာ ပွင့်လင်းသွားတာ နဲ့ အမျှ အကျိုးရှိသတင်း တွေ နဲ့အတူ ပိုက်ဆံ အတွက် အခွင့်ကောင်း ယူမဲ့ အမြတ်ထုတ် သမား တွေလဲ ရှိလာမှာ ဖြစ်ကြောင်းကို သတိရှိသင့်ကြောင်း သိစေချင်တာပါ။
ဒီမိုကရေစီ နဲ့ အတူပါလာမဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် တွေ ကြားမှာ ကိုယ့်နာမည် ကို မပျက်စေချင် တော့ အတော်လေး အဖက်ဖက် က သတိထား သင့်ကြောင်း သိစေချင်တာပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူတွေ ကိုလဲ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
နေ့လည် က ဒီ Postကို တင်သင့်/မတင်သင့်၊ ဒီ ပုံကို တင်သင့်မတင်သင့် ဒွိဟဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အခု ကျွန်မ အနီးကလူ ကလဲ ဘာလို့ တင်လိုက်တာလဲတဲ့။ ;-)
ကျွန်မ တွေးလိုက်မိတာက ပုံမတင်ဘဲ သတင်းဘဲ ထည့်ရင် ပုံကြည့်ချင်မဲ့ ငါ့လူတွေ ကွန်ကောင်းကောင်း နဲ့ အတော်အားထုတ်နေရမလား ဆိုတာရယ်။
ပုံကလဲ အမြင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သိပ်မဟုတ်ဘူး ထင်လိုက်တာရယ် နဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
နောက်အရင် အင်္ဂလိပ်မင်း အဆက်ဆက်မှာ သူတို့ကို ခေါင်းတောင်မော်မကြည့်ရဲ တဲ့ ခေတ်ကနေ လှောင်ပြောင်ရဲ တဲ့ ခေတ်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းသွားပြီ ဆိုတာလဲ ပြောချင်လို့ပါ။
အခု တော့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။
ကိုနေးချား ပြောသလိုဘဲ ကိုယ်က ထပ်တင်လိုက်တော့မှ သူ့ကို အသရေဖျက် ရေနစ်သူဝါးကူထိုး ဖြစ်နေမလားဘဲ။
သတင်းစာကိုလဲ ကြော်ငြာ ပေးသလို ဖြစ်နေပြီ။
အမှန်တော့ အဲဒီ သတင်းစာ ကို ဝယ်ဖတ်တဲ့ လူတန်းစားက အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ များတယ် လို့ ဆိုတာဘဲ။
အဆိုး အကောင်းဝေဖန် ပေးသူများ အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါရှင့်။
အခုဘဲ သတင်းတစ်ခု ထပ်ဖတ်ရပါတယ်။
သတင်းဌာန တစ်ခု ကပြောသတဲ့။ သူတို့ အမျိုးသမီး ၂ယောက် ဆီက ဖုန်းရသတဲ့။
အဲဒီ အမျိုးသမီး ၂ယောက် ဆီမှာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ အများကြီး ရှိသေးသတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတော့ တော်ပါပြီ။
ဘာသတင်းမှ ထပ်မံ မထုတ်လွှင့်တော့ပါ ကြောင်း။
တော်ဝင်မိသားစု မှ ထူးခြားသော တုန့်ပြန်မှု ရှိလာခဲ့ရင်တော့ အသိပေးပါမည်။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဘာ official complaint မှ မရှိလို့ ပြောပါတယ်။
မင်းသားကြည့်ရတာ အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့sex party ကျင်းပဟန်တူတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူငယ်တွေလုပ်တဲ့ ညဉ့်နက်ပိုင်းပါတီတွေမှာကို အဲလိုမျိုးဆန်ဆန် ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မကင်းပါဘူး။ တိုးရစ်တွေများလာတာနဲ့ နောက်ပိုင်း အဲဒီပါတီမျိုးတွေ လူနေတိတ်ဆိတ် ခြံကျယ်ကြီးတွေမှာ ပုံမှန်ရှိလာလိမ့်မယ်။ တချို့ကြတော့လည်း တယောက်ထဲ အားမရတော့ အုပ်စုလိုက် group sexလုပ်၊ တချို့ကြတော့ လူဆိုတာ အစုံစားသတ္တဝါဆိုပြီး ကိုယ့်လူသူ့လူ အလဲအလှယ်လုပ် သုံးဆောင်ကြ…. အရင်းအမြစ် စစ်ရင်တော့ သဂျီးတို့ရုပ်ဝါဒီများပြောတဲ့ ငယ်တုန်းရွယ်တုံး စပါယ်ရှယ်သုံးဆိုတဲ့ အမြင်ကနေ ပေါက်ဖွားလာတာပဲ။
မင်းသားဟယ်ရီအနေနဲ့ သူ့ပစ္စည်း သူသုံးတယ် ဆိုပေမဲ့ အများပြည်သူ အခွန်ဘဏ္ဍာမှပေးတဲ့ ခံစားခွင့်အဆောင်အယောင် ယူထားရင် မလုပ်သင့်ဘူး။ နန်းတော်ထဲမှာ၊ သူ့အိမ်မှာ နေတာကို ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တာဆို ဓာတ်ပုံဆရာ၊ သတင်းစာမှာ အပြစ်ရှိပေမဲ့ တော်ဝင်မင်းသားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်နဲ့ မကိုက်ညီဘဲ ပြင်ပတနေရာရာမှာ ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ ထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာ လက်လွတ်စပယ်နေရင် အခုလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားရမယ်၊ ဂျိမ်းစဘွန်းခေတ်ကလို လူတစုမှာပဲ အဲဒီနည်းပညာ ရှိတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်လို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ထွန်းသစ်စ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပြောရင်တော့ သူတာပါး လွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်ရာကြပေမဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ မလွန်ဘူး သတင်းသမားဖက်က ပြောရမယ်။ မင်းသားအနေနဲ့ မကျေနပ်ရင် တော်ဝင်ဘွဲ့စွန့်လိုက်ပါ၊ သာမာန်အရပ်သားတဦးလိုနေပါ။ ဒါဆိုရင် လွတ်သွားမလား၊ ဘယ်လွတ်မလဲဗျာ…အဲဒီကြမှ ပိုတောင်အချောင်း ခံရအုံးမယ်။ တော်ဝင်မိသားစုမှာ မွေးလာတဲ့ ကံကိုသာ အပြစ်တင်ပေတော့….။
ကိုကြောင်ကြီး လိုဘဲ ပြောသူတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
တော်ဝင်မို့ တော်ဝင် ရဲ့ ဂျူတီ ကို ၂၄/၇ ဆွဲထားရမတဲ့။
လူလူချင်း ဘာကွာလို့ တော်ဝင်တွေ၊ သာမာန်သူတွေ ဖြစ်ပြီး အရိုအသေ ပေးနေရတာလဲ လို့။
အရင် ဘုရင်မကြီး လက်ထက် တုန်းကတော့ ထားပါတော့။
သူ့ဟာသူ သီးသီးသန့်သန့် ဘုရင်မ ဆိုပြီး ဂျူတီ ယူခဲ့တာ။
အခု သူ့မြေးတွေ ကျတော့ တစ်ခြားသူတွေ နဲ့ လက်ရည်တပြင်တည်း အလုပ်လုပ် နေရတာ။
သင်တန်းမှာတောင် အပြစ်လုပ်လဲ ပြစ်ဒါဏ်ခံရတာဘဲ။
သူများ ထက်ပိုပြီး အခွင့်မခံ ရပါဘူး။
တပ်ထဲ မှာလဲ တော်ဝင်ဆိုပြီး ဘယ်သူကမှ သူတို့ ကို တစ်ချိန်လုံး ဦးညွှတ်မနေပါဘူး။
ဒီတော့ မင်းသားတွေ စိတ်ထဲ မှာ သူတို့ ဟာလဲ သာမာန်ထက် ဘာမှ မထူး လို့ သာ စိတ်ဝင်နေတော့ မှာပါ။
ဒီတော့ ဟာရီ က (ချမ်းသာသူတွေ လုပ်လေ့ရှိသလား။ ???)
အဲဒီမှာ ချွတ်တမ်း ဂိန်း ကစားတာ ဘာမှားလဲ။
တစ်ခု ပြောစရာကတော့ မသိတဲ့ Working Class မိန်းကလေး တွေ ကို ဖိတ်ခဲ့တာ လို့ ဆိုကြတယ်။
မိုဘိုင်းတွေကို လဲ မတားခဲ့တာ အမှားပေါ့။
ဒီ မိန်းကလေးတွေ က ငွေရပေါက်ဖန် ခဲ့တာဘဲ။
သတင်းသမားတွေ က ခိုးရိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။
မိန်းကလေး တွေ က ဓာတ်ပုံ တွေ ကို ရောင်းစားခဲ့တာ။
ကျွန်မ သာ ဘုရင်မကြီး နဲ့ တွေ့ရင် အသေအချာ ဦးညွှတ် မှာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ ကလေး တွေ ကို တော့ ဦးညွှတ်မယ် မထင်ဘူး။
ဒီတော့ သူတို့ တော်ဝင်ဟန်ပန် မဖမ်းလဲ အပြစ်လို့ မယူဆ မိတာဖြစ်မှာပါ။
မှတ်ချက်တွေမှာ ပိုဆိုးလာတာက သူ့အမေ၊ အဖေတို့ တုန်းက ပြသနာ အရာတွေ ကို လူတစ်ချို့က တူးလာကတော့ မကောင်းပါဘူး။
သတင်းစာတိုက်ရှင် Rupert Murdoch ကတော့ UK ရဲ့ free press ကို demonstrate လုပ်ပြလိုက်တာ ဆိုဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ကို ပြည်သူ တွေ က ဝိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ပါသတဲ့။
More than 850 complaints have been made to press watchdog the PCC about the publication of photos in the tabloid newspaper Claimed we should ‘give Harryabreak’
and that ‘the public loves him’
ကောကဟာလလား တော့ မသိပါ။
ဟိုးအရင်က ဝီလျှံ က သူလက်ထက်မှာ ဘုရင်စနစ် ကို ဖျက်သိမ်း မယ် ဆိုဘဲ။
သူလဲ သာမာန်ဘဝ ကို များ ပိုပြီး နှစ်သက် နေသလား။
သာမာန်လူလို ဖြစ်သွား ရင်တော့ ဒီလောက် တော့ သဲသဲလှုပ် လိုက်တော့ မယ် မထင်ဘူး။
ဝှက်လွန်း ရင်သာ လိုက်တာလေ။
ပုံမှန် သူလို ငါလို ဆို ဘယ်သူ က ကြာရှည် စိတ်ဝင်စားမလဲ။
ကျွန်မ ဆိုလဲ ကကြောင်ကြီး တော့ ဘယ် သူ့ကိုတော့ လိုက် နေပြန်ပြီ၊ ဘယ်သူကတော့ တီး လွှတ်လိုက်ပြန်ပြီ ဆိုတာ ကို ဟာရီ ထက် ပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ ;-)
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ဖြစ်နေတာကိုး။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကို နဲ့ ကိုယ်နဲ့နီးရာ ကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားကြတာပါ။
ကိုလိုနီခေတ်က.. မြန်မာပြည်ကို ဝေလမင်းသားလည်လည်လာတုံးကများ.. မြန်မာပြည်က..အထက်တန်းစားပါဆိုတဲ့… မိန်းမတွေဆိုတာ..
ဒန့်တန်တန်ဖြစ်လွန်လွန်းလို့.. မီဒီယာတွေက.. အသည်းအသန်တားရပြုရနဲ့..။
အမှတ်မမှားရင်.. ဆရာကြိးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတောင်.. ဒွေးချိုးစပ်ခဲ့တာ..။
အခုတော့.. မင်းသားငယ်ရဲ့..ကိုယ်တုံးလုံးပုံတက်လာတာတောင်.. သိပ်မဟုတ်ကြတော့..
.. သြ.. အိုဘယ့်ကမ္ဘာ..
ကျုပ်တို့ အမေကြီးကား မှာ ဝီလိုဝီလို ရှီလယ်ဗြ ဗြဲ
ဒီသတင်း ကို အရီးပြောမှပဲသေချာသတ်ိထားမိတော့တယ်. မင်းသမီးဆိုရင် တော့တညိုးပေါ့.
အရီး ကလဲ မင်းသားလေး မို့ အချိန်ကုန်ခံ သတင်းယူတင်တာပါ။
“Harry regrets the embarrassment he has caused the royal family around the world and plans on apologising for his antics,”asource told Radar Online recently.
“Even on vacation, the Prince has to realise that he is an ambassador for the country and should behave appropriately.”
Read more: http://www.belfasttelegraph.co.uk/entertainment/news/prince-harry-not-in-hiding-16203477.html#ixzz24skufB6t